မပြောင်းတော့ဘူးလား | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » မပြောင်းတော့ဘူးလား
Posted by ဂျစ်စူ on Jun 30, 2012 in Creative Writing, Think Tank | 36 comments
Myanmar or Burma slkk
ဘာပေါရမှန်း မတိရို့ တစ်ဆယ်ယူပီး လစ်ပီနော်
((မည်သည့် ပဒေသရဇ်ခေတ်ကတဲက နေ့ စဉ် ရေးသား၊ ပြောဆိုနေခဲ့ကြမှန်းမသိတဲ့
“ သများ.. ” လို့ ခပ်ချွဲချွဲလေးသုံးကြရင်ကောင်းမလား….
အိုင် တို့ ယူ တို့ သုံးကြည့်ရအောင်…
ပခုက္ကူက ဆရာတော်ကြီးတစ်ပါးက ပြောဖူးပါတယ်။ “ကျုပ်” ဆိုတာ “ကျွန်ုပ်” ဆိုတဲ့စကားက ပြောင်းထားတာတဲ့…. ကျွန်ုပ်ရဲ့ အတိုချုပ် ကျုပ်ဖြစ်တာတဲ့။
ပြီးတော့ … ဗိုလ်ချုပ်ဈေးက ငှားလာတဲ့ စူဗီးနီးယား ပိုက်ဆံလေးလဲ မြန်မြန် ပြန်ပေးလိုက်ဦးနော်…
ဘီအီးနဲ့ လဲသောက်မိလို့ လျော်ရခက်နေမယ်….
ကိုစိန်ဗိုက်တောင် ဆံပင်တော်တော်ရှည်လာပြီ မညှပ်သေးဘူးလား
သူ့ အတွေးနဲ့ သူခေါ်
အစိပြောဒါကို ကျော် ထပ်ပြီးထောက်ခံပါတယ်..
Burma နဲ့ Myanmar ကိုတော့ မပြောတတ်ဘူး။
ပြသနာ က နိုင်ငံ့ အပြင်မှာ တစ်ချို့ က မြန်မာ လို့ ပြောရင် မသိ လို့ ဘားမား လို့ ပြောမှ သိကြပါတယ်။
စိန်ဗိုက်ဗိုက် ဘဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ ပေါက်ဖော် ဘဲ ဖြစ်ဖြစ် ချစ်ဖို့ ကောင်း ရင် ချစ်မှာဘဲ။
အစအဆုံးရေးလာတာ အကောင်းတွေချည်းမှဘဲ နောက်ဆုံးအဆုံးသတ်မှာ
အမေစုကိုလည်း မြန်မာလို့ပဲ သုံးပေးစေချင်ပါတယ်။နေရာ တော်တော်များများ မြန်မာလို့ သုံးနေပြီ ထင်လို့ပါ။
မြန်မာလို့ ပြောလို့ မသိတော့လည်း ဗားမားလို့ ခေါ်သေးတယ်လို့ ထပ်ပြောလိုက်မှာပေါ့။ ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ်လိုရင်းက သိဖို့ပဲလေ။
ကျမလို့ပဲ သုံးနေတာ ကြာပေါ့။
ကျုပ်က.. (ကျွန်နုပ်ကလာတာဖြစ်နိုင်ပေမဲ့..) ကျွန်တော်ထက်.. နည်းနည်းများသာသလားလို့..
.. မြန်မာလူမျိုးထဲ..ပထမဆုံးပါမောက္ခ ဦးဖေမောင်တင်က..နင်..ငါနဲ့…. သခင်ဘသောင်းသုံးတော့.. ကြိုက်နှစ်သက်တယ်ပြောဖူးတာပဲ..
ယနေ့မှစ၍ ရွာဦးသျှောင်အဓိပတိအား ဒဂျီးဟု မှန်ကန်စွာခေါ်ဆိုကြရန်နှင့် မမှန်မကန်စာလုံးပေါင်းခေါ်ဆိုပါက ပွိုင့် ၁၀၀ စီနှုတ်မည်ဖြစ်ကြောင်း အရည်မရအဖက်မရ စာလုံးပေါင်းစိစစ်ရွေးချယ်ရေးကော်မရှင် (ကိုယ့်ဘာသာဖွဲ့၊ ကိုယ့်ဘာသာခန့်) မှ သတိပေးခြိမ်းချောက်ထုတ်ပြန်လိုက်သည်….။
မြန်မာ ဖြစ်ဖြစ်၊ ဗမာ ဖြစ်ဖြစ်
နာဂဒေါ့ ဒါဗြဲ …….
အဆင်ပြေသလို ရေးကြပြောကြတာ ကောင်းပါတယ် ဗိုက်ဗိုက်စိန်ရယ်။
ဘယ်သူတွေ ပြောင်ပြောင် မပြောင်ပြောင်
ဒေါ်စုက ဘားမားလို့ မပြောင်းမလဲ ခေါ်ရဂျင်း အကြောင်းအရင်းဂ စစ်ဗိုလ်တွေ တိုင်းပြည်အမည်ကို ပြည်သူ့ဆန္ဒမခံယူဗဲ ကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းတခုလို ပြောင်းဂျင်တိုင်းပြောင်းခဲ့ အသုံးချခဲ့တာကို ကန့်ကွက်တဲ့သဘော ဖြစ်ပါတယ်။ စစ်တပိုင်းအစိုးမရအနေနဲ့ တကယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုရှိရင် ပြည်သူ့ဆန္ဒခံယူကြည့်လိုက်ပါလား။ နအဖလက်ထက်မှာ ပြောင်းလဲခဲ့တဲ့ နိုင်ငံအလံလည်း တရားမဝင်ဘူး။
ကပ္ပိယ သာဂိ says:
မနေ့ကတော့ဝင်မန့်ခဲ့သေးတာပ ကိုရွှေကဝန်နရှင်ဒွက်ခပေးလိုမတတ်သွားဘုးဗျ၊ အချိန်သိပ်မရလို့မမန့်နိုင်တော့ဘူးဗျာ မကွေးတိုင်းဒေသကြီးဆိုတာတောင်စာရေးရတာလည်း စာလုံးရေများသလိုခေါ်ရတာလည်းမောသဗျ။ အခေါ်ဝေါတွေကြောင့်တိုင်းပြည်ကတိုးတက်မလာပါဘူးဗျာ အားလုံးတတ်နိုင်သမျှဝိုင်းကြိုးစားမှတိုးတတ်မှာပါဗျာ။
မြန်မာလို့ ခေါ်တာပဲ ကြိုက်ပါတယ်…ဦးကြောင် ပြောသလိုပဲ မြန်မာလို့ ပြောင်းတာကို မကြိုက်ရင် အလံသစ်ပြောင်းထားတာကိုပါ ဆန္ဒပြပေးပါ…လူတစ်ရာကို သွားမေးကြည့် အနည်းဆုံး ၉၉ ယောက်၊ အများဆုံး ၁၀၀ လုံးက အလံဟောင်းကိုပဲ ကြိုက်ပါတယ်လို့ ပြောလိမ့်မယ်…
ပထမနှစ်ကျောင်းတက်တော့ အဆောင်နေတုန်းက အဆောင်ပိုင်ရှင်က အသက် ၇၀ ကျော် အပျိုကြီး၊ ကျောင်းဆရာမဟောင်း..အရမ်းလည်း ပစိပစပ်များတယ်… မွန်မွန်တို့ အဆောင်သူ သူငယ်ချင်းတွေ နင်..ငါ..နဲ့ စကားပြောတော့ သူက ပြောတယ်…နင်တွေငါတွေနဲ့ အခုခေတ်ကလေးတွေ အရမ်းရိုင်းတယ်တဲ့..ကြီးကြီးတို့တုန်းကဆို အဲဒီလိုမပြောဘူး…ယူနဲ့ အိုင်နဲ့ပဲ ပြောတာတဲ့….
ဆိုတော့ကာ…လောလောဆယ်တော့ စကားပြောရင် နာမည်ပဲ ထည့်ပြောတာကောင်းမလား…ကျနော် ကျမ ဆိုတာကတော့ သတ်ပုံကျမ်းထဲမှာ မပါသေးသောကြောင့် သတ်ပုံမှားသည်ဟု သတ်မှတ်ပါကြောင်း…
သတ်ပုံအတွင်းရေးမှုး အစိုကို ကျော် ထပ်ပြီး ထောက်ခံပါတယ်..။
ရှေး ခေတ်ထဲက ကျမကို ကျွန်မလို့သုံးတာ ဒီနေ့ထိတောင်တွေ့နေပါသေးတယ် ဒါပေမယ့်တက်နိုင်သလောက် အမေစုပေါင်းပြနေပါတယ် ကျမ လို့ရေးသား ပြထားပါတယ်
ကျနော်ကတော့ အရင်တုန်းက ကျွန်တော်လို့ရေးနေရာကနေအခုတော့ ကျွန်တော်ကနေ ကျနော်လို့ပြောင်းရေးလိုက်ပြီ။